Xubno Taageera Kooxda Jwxo-shiil, oo Calan Keenay Xarun Lagu Tababaro Dadka Shaqo La,aanta ah – Rasaasa News
Mar 9, 2011 aanta ah, dambiile, Eritrea support terorrist group, ethiopia peace, Jwxo-shiil, ogaden peace, oo Calan Keenay Xarun Lagu Tababaro Dadka Shaqo La, Xubno Taageera Kooxda Jwxo-shiil
Dublin, March 9, 2011 [ras], xubno taageera kooxda Jwxo-shiil, oo calan la yimid goob lagu magacaabo [ FÁS Baldoyle Training Centre Dublin, Irland] oo ah xarun lagu tababaro dadka shaqo la,aanta, waxayna waydiisteen gabadh ka mid ah dadkii tababarka qaadanayey in ay huwato marada, si ay sawir uga qaadaan, dabadeedna gabadhii oo ka dhiganaysa ciyaar ayaa huwatay, kolkaas ayey sawiradii u gudbiyeen mid ka mid ah dadka ku waashay taageerada Jwxo-shiil, ee beenta internet-ka ugu qora. Ogadennet.comwuxuusoo qoray “Siminaar caalami ah oo lagu qabtay wadanka Ireland oy Jaaliyada Denmark ka qaybgashay.”
Xasan Cali, wuxuu degan yahay dalka Denmark, waxaana uu ka mid yahay dadka ka laba canleeya dalalka Yurub, Xasan deganaasho labaad ayuu ka haystaa dalka Irland. Xasan Cai laba canlaynta wuu ku guulaystay waxaana uu Irland Keenay dad dhawra oo degan dalkaas ku nool guriga isaga la siiyey.
Hadaba, Xasan Cali ayey waaxda shaqada ee dalka Irland ugu yeedhay in uu qaato tababar xirfadeed si uu shaqo u helo, maadama uusan walgii shaqaynin. Tababarkan oo bilowday bishii December 2010, ayaa loogu talo galay in uu socdo muddo saddex bilood ah oo ku ekayd March 4, 2011.
Xasan Cali oo ah dadka si miyir la,aanta ah u taageera Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu ka fikiray, maxaad ku odhan Asaxaabtii Denmark, maadaama oo aad muddo ka soomaqnayd dalka Denmarka, si ayna su,aalo badan asaxaabtu kuu waydiinin Iska dhig nin Ingriiska gaadhay dadbadeedna shir kaga qayb galay Irland.
Waxaa kale oo uu xasan Cali ka fikiray wax run u egg oo been ah runtiina faa,iido u noqon kari lahayd Jwxo-shiil, hadii aanaan runta soo bandhigi lahayn.
Xasan wuxuu kala sheekaystay arintaas ninka qora Ogadennet.com oo degan dalka Canada, waxayna isla qaateen in Xasan si uu yeelaba uu isku dhex sawiro isaga oo calan wata dad tababarka qaadanaya. Nasiib daro Xasan Cali waa loo diiday in uu qolka dhexdiisa sawir Calan leh ku sameeyo dabadeedna banaanka ayuu sawir ku qaaday.
Sida aad sawirka ka arkaysaan waxaa ku jira dhawr ruux oo Somali ah oo ka qayb qaadanayey tababar xirfadeedka, laakiin way ka diideen Xasan in Calanka lagu sawiro.
Qaar ka mid ah dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku kala nool dacalada aduunka ee akhrista Internet-ka, ayaa nasiib darada haysata maalin walba khalad loogu qoraa Internet-ka, kolkaas ayey maskaxdoodu heshaa fariin been ah oo run u egg, sidii Indho aan aqoon oo arkay Dhaan Dabangaale deedna biyo mooda.
Sansaankii Somali Galbeed ee Sideetamaadkii, Sow Kama Jiraan Xerada Samafalka ee Bariga Kenya